Innovative Tourism Star Tollman Anorasikirwa neKenza neCancer pazera makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Innovative Tourism Star Tollman Anorasikirwa neKenza neCancer pazera makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • France Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • nhau • vanhu • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • Trending Now
Global evashanyi indasitiri anoona, muzvinabhizimusi, uye philanthropist Stanley S. Tollman, muvambi uye sachigaro weThe Travel Corporation (TTC), iro rakabudirira kwazvo boka rekufambisa repasi rose rinosanganisira anopfuura makumi mana mibairo-kuhwina mibairo inosanganisira Trafalgar, Insight Vacations, Contiki Mazororo, Red Carnation Mahotera, uye Uniworld Boutique River Cruises, uye piyona wesangano rekufamba nzendo kuburikidza neasina-purofiti TreadRight Foundation, akafa zvichitevera kurwa nekenza. Aive nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe.
Anopembererwa semugadziri weindasitiri yemazuva ano yekufambisa, Tollman akaita kuti zvibvirire makumi emamirioni kuti awane pasi rose kuburikidza neeportfolio yake yemakambani ekufambisa.
Anogona kurangarirwa zvakanakisa saiye anodikanwa tateguru uye mutariri wezana-zana-zera, vemhuri-vane bhizinesi.
Nhasi TTC ine vashandi vanopfuura zviuru gumi, vachiendesa mutsauko usingaenzaniswi kune vashanyi munyika dzese makumi manomwe pasi rese.
Mwanakomana wechiJuda Lithuanian vatorwa vakapukunyuka hupenyu hunotyisidzira kupokana neSemitism muCzarist Russia, Stanley Tollman akaberekerwa mumusha mudiki wekuSouth Africa wehove wePaternoster muWestern Cape uko vabereki vake vaishandisa hotera ine mwero ine zvimbuzi zvekunze uye uko mudiki Tollman aifamba asina shangu achiri kutora kudziya uye hunhu hwekushanda hwemhuri yakazvipira kugamuchira vaeni.
Baba vake Solomon Tollman vakadaidza vemhuri vanoda zvekuchengetwa kwevatengi ethos 'inotungamirwa nebasa' uye nzira iyi, pamwe nekutsvaga kusingaperi kwekugona, yaizove chiratidzo chebasa raStanley Tollman, chidzidzo uye uzivi hunogara kwenguva refu hwaakachengeta mukati memakumi emakore ake ekugamuchira vaeni. basa uye akaiswa muzvizvarwa zvevaTollmans izvo zvinoramba zvichitevera tsoka dzake.
Mwanakomana we Africa Anogadzira Zviratidzo Zake Pasi Pano
Muna 1954, Stanley Tollman akaroora Beatrice Lurie, achitanga isingagumi nyaya yerudo nekubatana. Kugovana rudo rwekugamuchira vaeni, vaviri vechidiki vakashandisa mari yavo yemuchato kutenga yavo yekutanga imba - iyo Nugget Hotel muJohannesburg.
Tollman akashanda nesimba, achityairwa nekusingaperi kutsvaga kwake uye nzara yekukonzera Chamhembe Afrika uye, kana zvichibvira, nyika. Mukana wakauya muna 1955 nekudyara kwechipiri kwaTollman, The Hyde Park Hotel, hotera yekuvhuna mabhuki muSouth Africa iyo yakasimbisa zita raTollman semucherechedzo wepamusoro uye yakapa muhotera mudiki mukurumbira.
KuHyde Park, Stanley naBea vakashanda vakabatana, naStanley aibata pamberi peimba uku Bea achishanda kumashure, achive iye chete mukadzi wechikadzi mukuru muSouth Africa panguva iyoyo. Pfungwa yavo yeimba yekudyira siginecha yehotera, iyo Colony Restaurant yakatsanangudza hukuru uye pakarepo ikava inonakidza yekunzwa. Tollman akafamba nyika kuti aunze anozivikanwa epasi rese cabaret zviitwe pano, kukwidziridza South Africa kuratidzwa kune vekunze maartist mukutamba nemumhanzi. Ndicho chekutanga kutambirwa maartist ane mukurumbira uye vane mukurumbira vakaita saMarlene Dietrich naMaurice Chevalier nevashandi vemumafirimu - vanosanganisira firimu renhoroondo raStanley Baker "Zulu" airidza Michael Caine - kuSouth Africa muma1950 nema60.
Mukurumbira weTollman wekugona wakakura nekuunzwa kweTollman Towers, hotera shanu yekutanga muSouth Africa, hotera yese, yakateverwa neyekutanga kupinda muindasitiri yekufamba nekutenga kweTrafalgar Tours muna 1969. Ziso raTollman rinotarisa mashandiro nemaitiro matsva kuenda kunonyudza kunoshandura iyo diki, ichangoburwa kambani yekufamba kuita imwe yeanopa mibairo-anokunda epasirese maratidziro ekufambisa ane anopfuura makumi masere emubairo kusvika parizvino. Trafalgar haina kungowedzeredza kubata kwaTollman kupfuura mahotera, asi kumisika yepasi rose yekufamba, ichigadzira nzira yekusikwa kweThe Travel Corporation sezvazviri nhasi.
Achifunga nezvaTollman semukuru wepasirese uye anoremekedzwa wepanguva ino, Sir Geoffrey Kent, Muvambi, Co-Sachigaro uye CEO wekambani yekufambisa yepamusoro Abercrombie & Kent vakati:
Dea Adria Mallin anoti:
Kuremekedza kwaLinda Hohnholz kune mushakabvu Stanley Tollman kwakamuunza kuupenyu! Ko munhu anoshamisa. Iko kuzvipira kwakadini kuhunhu, tsitsi, kumbundira vanhu vese apo vamwe vaipatsanura uye vachikunda nekuda kwekukura kwavo, uye mupiro wakadii kune indasitiri yekufambisa yekupfumisa zvakanyanya kugona kwayo, nechinangwa chekugovana pfuma yeshoko, kuvachengetera ramangwana. zvizvarwa, uye kuwedzera ruzivo rwekufamba kwemamiriyoni. Ndatenda, Linda. Ndatenda, Stanley Tollman.